PSJTV | ट्रम्पका विरोधी मेक्सिकोमा राष्ट्रपति, बन्ला त सीमामा पर्खाल ?
ट्रम्पले यो एजेण्डालाई अघि सार्नुको प्रमुख कारण मेक्सिकोका कारण अमेरिकामा भएका विविध हानीलाई देखाउनुभएको थियो । उहाँले त्यस समयमा गर्ने भाषणका प्रमुख अंश मेक्सिकोलाई ‘गालीगलौज’ मा बढी खर्चिने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँकै भाषामा मेक्सिकोका कारण अमेरिकामा आतङ्ककारी आक्रमण हुने गरेका छन् । अमेरिकामा बढी लुटपाट र हिंसा मच्चाउनेमा पनि मेक्सिकोका नागरिक बढी छन् भन्ने उहाँको तर्क थियो । त्यसैले मेक्सिकोको यो त्रासबाट मुक्ति पाउन उसको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल लगाउनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । मेक्सिकोतर्फबाट अवैधरुपमा नागरिक अमेरिका छिर्ने र त्यसमा बढी त मेक्सिकोकै नागरिक भएकोले अमेरिकालाई खतरा उत्पन्न हुने गरेको उहाँले बताउदै आउनुभएको छ ।
त्यस्तै उहाँको अर्काे एजेण्डा अवैध आप्रवासीलाई अमेरिकामा स्थायीरुपमा बसोबास गर्न नदिइने भन्ने पनि थियो । त्यसको दोषी पनि उहाँको नजरमा मेक्सिको नै थियो । मेक्सिकोका धेरै आप्रवासी अवैधरुपमा अमेरिका छिर्छन् र लुटपाट गरेर आतङ्क मच्चाउने गर्छन् भन्ने उहाँको आरोप थियो । त्यसैले पनि उहाँले मेक्सिकोसँग पर्खाल लगाउने प्रस्ताव गरेको बताउनुभएको थियो । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएको पनि डेढवर्ष भइसक्यो । यस समयमा उहाँले मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउने जग हाल्न सक्नुभएको भने छैन । तर पनि यो एजेण्डालाई भने उहाँले जिवीतै राख्नुभएको छ । बेला बेलामा उहाँको भाषणमा अहिले पनि आफ्नो उक्त कार्यक्रम प्राथमिकतामा नै रहेको बताउने गर्नुहुन्छ ।
त्यो एजेण्डा यतिखेर भने अमेरिकामा आएर अझ बढी चर्किएको छ । मेक्सिकोमा नयाँ राष्ट्रपति आएपछि यसले उक्त एजेण्डालाई अमेरिका र मेक्सिकोमा पनि अझ बढी चर्काइदिएको महसुस भएको छ । किनभने मेक्सिकोका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका एक कट्टर विरोधीका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । उहाँको आगमनले यी दुई छिमेकीको आगामी सम्बन्ध कस्तो होला भन्ने प्रसंगले यो पर्खाल प्रसंगलाई पुनः एकपटक सम्झाइदिएको हो । मेक्सिकोमा गएको आइतबार सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा यहाँका पुराना वामपन्थी नेता आन्द्रेस म्यानुएल लोपेज ओब्राडोरले जित हासिल गर्नुभएको छ । यो जितसँगै यहाँ वामपन्थी शक्तिको पुनः उदय भएको छ । छिमेकमा भएको यो उदयले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई पुनः एक पटक झस्काइदिएको छ । एकातर्फ आफ्ना कट्टर विरोधी र अर्कातर्फ छिमेकमा दशकौँका परम्परावादी शक्तिलाई परास्त गर्दै वामपन्थी शक्तिको उदय । राष्ट्रपति ट्रम्पको पर्खाल र आप्रवासीमात्र नभएर सबैखाले नीतिहरुमा पनि उहाँको उदयले अमेरिकालाई नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
ओब्राडोरको विजयसँगै मेक्सिकोको मूल धारको राजनीतिबाट दुई ओटा प्रमुख राजनीतिक दल रिभोल्युसनरी पार्टी र नेसनल याक्सन पार्टीको दशकौँ पुरानो एकाधिकार भने तोडिएको छ । यी पुराना र यहाँको राजनीतिक परिदृश्यमा विगत लामो समयदेखि कब्जा जमाउँदै आएका ठूला दलको पराजयबाट उदाएका आब्राडोरले यी दललाई देशको राज्यसत्तामा गैरराजनीतिक माफिया भनेर टिप्पणी गर्ने गर्नुहुन्छ । मेक्सिको सिटी नगरका पूर्वमेयर ओब्राडोर आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीसँग सबैभन्दा बढी मतान्तरले विजयी हुनुभएको छ । उहाँका प्रतिद्वन्द्वीको २३ प्रतिशतमात्र मत रहेकोमा उहाँले भने ५३ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुभएको छ । ६४ वर्षीय ओब्राडोरले चुनावी परिणाम घोषणा भएलगत्तै मेक्सिकोका हरेक क्षेत्रमा आमरुपमा परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले खासगरी मेक्सिकोमा बढ्दो भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने काममा आफू लाग्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।
गत आइतबार सम्पन्न सो चुनावमा यहाँका करिब सात करोड मतदाताले मतदान गरेका थिए । ल्याटिन अमेरिकाको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रुपमा परिचित मेक्सिको यस क्षेत्रको एक ठूलो तेल निर्यातकर्ता देश पनि हो । तर पछिल्लो समयमा भने तेलको मूल्य खस्किएका कारण मेक्सिकोको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कट्टर विरोधी ओब्राडोर राष्ट्रपतिमा विजयी भएसँगै दुई देशबीचको यसै पनि नराम्रो सम्बन्धबारे पुनः चर्चा शुरु भएको छ । आफू राष्ट्रपति भएपछि पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मेक्सिकोका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन भने छोड्नुभएको छैन । केही महिनामात्र अघि पनि उहाँले मेक्सिकोका नागरिकलाई ‘चर्पीको प्वालजस्ता काम नलाग्ने देशका मानिस’ भनी टिप्पणी गर्नुभएको थियो । यो अभिव्यक्तिबाट पनि पछिल्लो समयमा दुई देशबीचको तनाव थप उत्कर्षमा पुगेको छ ।
तर राष्ट्रपति ट्रम्पले भने ओब्राडोरलाई आफ्नो ट्वीट अकाउन्टमार्फत बधाई दिनुभएको छ । उहाँले मेक्सिकोको सो निर्वाचनलाई वैधानिक भन्दै नयाँ राष्ट्रपतिसँग मिलेर काम गर्ने बताउनुभएको छ । दुई देशको यो कूटनीतिक अभ्यासकैबीचमा दुवै देशका विश्लेषकको प्रश्न भने जिवीतै छ– के सीमा क्षेत्रमा पर्खाल बन्ला त ? (विभिन्न एजेन्सीहरुको सहयोगमा) एकराज पाठक/ रासस
मिल्ने भए दुईटा प्रधानमन्त्री भई देश चलाउँथ्यौं : ओली
जहाज खरीदमा अनियमितता भए कारबाही गर्छु
नेताको घर धाउनेलाई बढुवा नगर्ने चेतावनी
काठमाडौँ : वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै लगेको सरकारले आइतबारदेखि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेबाट पनि श्रम स्वीकृतिलगायत सेवा प्रदान गर्ने भएको छ ।कर्णाली प्रदेशको श्रम तथा रोजगार रोजगार कार्यालयबाट पुनःश्रम ...
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री कार्यालयको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान महाशाखाले वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्था, व्यवसाय र पेसाकर्मीको क्षेत्रमा नियमनकारी निकाय तोकेको छ । महाशाखाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान ऐन, २०६४ अनुसार नियमक ...
काठमाडौं : नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) निकट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक कार्यकर्तालाई प्रहरीबाट छुटाउन ८० लाख विद्यार्थीलाई पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ। विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार पटकपटक हनन् हुँदा ...